वडामा प्रत्यक महिना स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्नेछु : वडा अध्यक्ष कार्की - Janawajnews.com | Online News Portal Nepal
वडामा प्रत्यक महिना स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्नेछु : वडा अध्यक्ष कार्की
७ असार २०७९, मंगलवार ०९:२४
अन्तर्वार्ता, मुख्य समाचार, स्थानिय सरकार
सिन्धुली, ०७ असार ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानिको विस्तार नै आफ्नो मुख्य योजना रहेको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर १० का नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष दिप बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । रेडियो सिन्धुली आवाजसंगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
यस्तै, अधुरो रहेको पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र खेतियोग्य जमिन सुरक्षाको लागि तटबन्दको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिने वडा अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । जुन आशा लिएर आफुलाई जिताउनुभयो उहाँहरुको त्यो आशालाई निराशा हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ ।
निर्वाचित हुँदै गर्दा बनाएका योजना र पाच वर्षे कार्यकालमा आफुले गर्ने कामको बारेमा वडा अध्यक्ष दिप बहादुर कार्कीसंग गरिएको अन्तरवार्ताः
तपाई पहिलो पटक वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भईरहदा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ?
म पहिलो पटक वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन पाउँदा अनौठो लागेको छ र खुसि पनि लागेको छ । म वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि वडामा भएका विभिन्न क्षेत्रको विकास लाई आफुले आफ्नै सम्झेर गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानीको विस्तार नै आफ्नो मुख्य योजना रहेको छ ।
तपाई पाँच वर्षको लागि विजय भईरहदा के कस्ता योजनाहरु बनाउनुभएको छ ?
पाँच वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित हुँदै गर्दा साविक १३ नम्बर र हाल १० नम्बरमा सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको व्यवस्था गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता साविकको वडाहरुमा पु¥याउने र महिनामा एक पटक स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने, खानेपानीको व्यवस्था, महिलाहरुको लागि शिपमुलक र आयमुलक तालिम तथा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने मेरो योजना छ । यस्तै, असक्त तथा अपांगहरुको संख्या तयार गर्ने, निम्न स्तरका विद्यार्थीहरुको विद्यालय शुल्कमा सहुलियतता प्रदान गरिदिने योजना छ ।
कस्ता योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
अधुरो रहेको पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने र खेतियोग्य जमिन सुरक्षाको लागि तटबन्दको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछु । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्ने नै मेरो मुख्य योजना रहेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, विद्युत, कृषि लगायत महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा के कस्ता योजना ल्याउनुभएको छ ?
महिलामा शिपमुलक र आय मुलक कार्यक्रम ल्याउन पहल गर्ने र बालबालिकाको हकमा पौष्टिक आहारको व्यवस्था गर्ने र पठनपाठन, सरसफाईमा वडा सकेको सहयोग गर्ने योजना छ ।
वडामा आउने बजेटले नागरिकको यस्ता आवश्यकता पुरा गर्न सकिन्छ ?
वडाबाट आउने बजेटले सबै काम गर्न त सकिदैन । गर्नुपर्ने काम धेरै छ । वडा भन्दा अन्य निकाय नगरपालिका, प्रदेश सरकार, संघिय सरकार संगै अन्य दातृ संस्थाहरुसंग समन्वय गरेर वडाको योजनाहरु पुरा गर्ने योजना छ ।
वडाका युवाहरुलाई स्वारोजगार बनाउने विषयमा के योजना ल्याउनुभएको छ ?
वडाबाट वडाका युवालाई रोजगार प्रदान गर्न के गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने बारे छलफल हामी गर्छाै ।
वडा नम्बर १० मा रहेका कति प्रतिशत नागरिक शिक्षा र खानेपानीको पहुँचमा रहेका छन् ?
वडामा हाल ७० प्रतिशत नागरिक शिक्षाको पहुँचमा रहेको छ । म मेरो कार्यकाल अवधिमा बाकी ३० प्रतिशत नागरिकलाई पनि शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउनेछु । साथै वडाबासीलाई खानेपानिको सविधाको लागि प्रदेश सरकारको १३ करोड ९४ लाख लागतमा खानेपानी योजना सुरु भईसकेको छ । अब छिटै नै खानेपानीको समस्या समाधान हुन्छ ।
वडाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई नागरिक बडापत्र सम्बन्धी जानकारी छ ?
यो भन्दा अघिल्लो कार्यकालमा त्यो व्यवस्था थियन अब मेरो कार्यकालमा नागरिक बडापत्र राखेर सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनेछौँ ।
वडामा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु केके छन् ?
वडामा भएका वृद्धवृद्धा, अपांग, दलित लगायतका लक्षित वर्गहरुलाई वडाबाट प्रदान गर्न सकिने सेवा सुविधा प्रदान गर्छाै ।
तपाँई अन्त्यमा वडा बासिलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
जुन आशा र आस्था राखेर आफ्नो अमुल्य मत दिएर मलाई बिजेता बनाउनुभयो उहाँहरुको आशालाई निराशा नहुने गरी काम गर्नेछु ।
सिन्धुली अस्पतालमा मृत्यू भएकी महिलामा कोरोना नेगेटिभ
कोभिड अस्पताल सिन्धुली आज बाट बन्द,३४ जना स्वास्थकर्मीलाई बिदाई
सिन्धुलीमा पुल निर्माणको लागी खनेको खोलाको दहमा डुबेर १२ बर्षिय बालकको मृत्यु
फिक्कलमा सौर्य लिफ्टबाट खानेपानी र सिंचाई
प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला जलाईयो
सिन्धुली अस्पताललाई ५ लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान